Dagaal mar kale ka dhacay Kalshaale - BBC News Somali
Dagaal mar kale ka dhacay Kalshaale
7 Febraayo 2011
Image caption Dagaalka Somaliland ka dhacay
Dagaalkan oo la sheegay inuu ahaa mid aad u culus oo labada dhinac ay isticmaalayeen hubka waaweyn ee artllerigu ka mid yahay waxaa uu geystay khasaare ballaaran oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira, waxaana uu socday saacado badan. ciidanka Somaliland waxay sheegeen inay iyagu hadda joogaan degaanku dagaalku ka dhacay.
Dhinaca kale, Maxamed Maxamuud Cabsiye oo jooga magaalada buuhoodle oo BBC-da la hadlay waxaa uu sheegay in maleeshiyada beesha Buuhoodle ay weli halkoodii ku sugan. waxaana uu sheegay inay iska caabbiyeen weerar saddex aag kaga yimid.
Maxamed Sheekh Cabdi Axmed oo Tuur loo yaqaano oo ka mid ah saraakiishii dhinaca Buuhodle ee ka qaybgashay dagaalkii maanta wuxuu ku dooday inay 12 nin ka dileen ciidanka Somaliland, 13 kalana ka dhaawaceen.
Ma jiraan ilo madaxbannaan oo xaqiijinaya sheegashooyinka dhinacyada dagaallamay, waxaase wararka badankoodu tilmaamayaan in khasaaraha dagaalkaasi uu ahaa mid ballaaran labada dhinacba.